Ọrụ ncheta: Michelle Obama, onye nnọchi anya ohu na ọkara uwe, “sitere na Adam na Iv”; maka ihe kpatara nke ha, ndị editọ akwụkwọ akụkọ nke Spanish kọwara Michelle Obama dị ka ohu gba ọtọ ọkara
Ezigbo nsogbu! Ozi ahụ siri ike ma doo anya:"Ndị Ojii / Africa sont ka bụ ndị ohu, n'agbanyeghị na di na nwunye Afro bụ ndị nwe ụlọ na White House kemgbe afọ 8 ". Ma ọ bụ otu Spanish slavers na colonists, obi ụtọ na kụrụ nsogbu, ndị na-enye onwe ha okomoko nke igwu egwu nke Ojii / Africa et ha na-atụ uche nkwanye ugwu na-enweghị oge ọ bụla nwaa iju ajuju otu mgbaghara. "Maka nsogbu ha mebiri ndị ojii / ndị Africa!" "
Ndị Spen na ndị agbata obi ha bi na Pọtugal anaghị ahụ nsogbu niile ha mere ndị nna nna ha Ojii / Africa. Nzoputa ha na anakpo ndi mo-ojo ha chebere ha? Ewoo! Ebee ka ọla edo niile ha kpakọbara kemgbe ọtụtụ narị afọ nke ịgba ohu na ịchị ụwa n'ụwa? Mama Nature ga-aga n'ihu na-ekwu na ha zuru oke n'ihi ha. Obi adịghị ha mma na ha bụ mba abụọ a (Spain na Portugal) ndị nọ nalags n'azụ mba Europe ndị ọzọ.
isi: Nnukwu Nchọgharị
Ọkt31 02: 34